Akhriso:-Ra’isalwasaare khayre oo Golaha Wasiirada si rasmiya ugu dhawaaqay – Idil News
Akhriso:-Ra’isalwasaare khayre oo Golaha Wasiirada si rasmiya ugu dhawaaqay
Ra’isal wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa goor dhawayd shaaciyey magacyada golaha wasiiradiisa. Shir jaraa’id oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya, ayaa af-hayeenka ra’isal wasaaraha oo uu barbar taaganyahay ra’isal wasaare Khayre, waxa uu warfidiiyeenka hortooda ka akhriyey liiska magacyada ra’isal wasaaruhu u soo xushay in ay ka mid noqdaan golaha xukuumadiisa.
Wasiiradda magacyadooda la shaaciyey ayaa tiradoodu tahay 26 oo shan xubnood (5) oo ka mid ahi yihiin haween. Liiska magacyada uu ra’isal wasaare Xasan Cabdi Khayre magacaabay oo aanay ku jirin wasiiru dawlayaasha iyo wasiir ku xigeennadu waxa uu u qornaa sidatan:
1- Avv. Mahdi Axmed Guuleed Khadar Ra’iisul Wasaare kuxigeenMahdi Ra’isul was are xigeen
3- Cabdi Salax Saciid Juxa, Arimaha Gudaha iyo dib
Be the first to comment on "Akhriso:-Ra’isalwasaare khayre oo Golaha Wasiirada si rasmiya ugu dhawaaqay"